Izimiso Zethu Ezisiqondisayo | Inkampani Sichuan Groupeve Co., Ltd.
Izimiso Zethu, Ukuziphatha, Nokuziphatha
Isebenzisa ngokugcwele izimpahla zethu eziyingqayizivele, i-Groumpeve izinikele ekuhlinzekeni ngemikhiqizo namasevisi asezingeni eliphezulu athuthukisa futhi athuthukise ukusebenza kwamakhasimende ethu.
Ukuzibophezela Kwethu Kumakhasimende
I-Groupeve izinikele ekwenzeni okuhle kukho konke esifuna ukukwenza. Sihlose ukwenza ibhizinisi ngendlela engaguquguquki nesobala nawo wonke amakhasimende ethu futhi asibambeli iqhaza elibalulekile empahleni yamakhasimende ethu. Amakhasimende athembela kakhulu kithi, ikakhulukazi uma kuziwa ekuphatheni ulwazi olubucayi noluyimfihlo. Idumela lethu lobuqotho nokusebenzisana ngendlela efanele libaluleke kakhulu ekuzuzeni nasekugcineni lokhu kuthembana.
Ikhodi Yokuziphatha ye-Groeveve kanye nezinqubomgomo ze-Groeve zisebenza kubo bonke abaqondisi be-Groeve, izikhulu, nabasebenzi benkampani. Zenzelwe ukusiza isisebenzi ngasinye ukuthi siphathe izimo zebhizinisi ngendlela efanele nangendlela efanele.
I-Groupeve izibophezele ekulandeleni izimiso eziphusile zokuphatha inkampani futhi yamukele izinqubo zokuphatha ngokubambisana.